कांग्रेसको काम के हो ? राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित, ओली सरकार थप शक्तिसाली « Onlinetvnepal.com
कांग्रेसको काम के हो ? राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित, ओली सरकार थप शक्तिसाली
Published : 31 January, 2019 4:43 pm
On : Banner, राजनीति, समाचार
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको विरोधका बाबजुद राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा विधेयक पठाइएको थियो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।
अब राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि विधेयक ऐन बनेर लागू हुनेछ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा दुईवटा संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता भएको थियो । राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लाल र नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीसहितका सांसदहरुले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।